कोरोलामा बन्ला त सुक्खा बन्दरगाह ? – Maitri News
कोरोलामा बन्ला त सुक्खा बन्दरगाह ?
गजुरेलले भन्नुभयो, “सो ठाउँमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नु प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक दृष्टिकोणले उपयुक्त रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।” सो बन्दरगाह निर्माण अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र परामर्शदाता कम्पनी छनोट गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९ईआईए०को काम सम्पन्न गर्ने बताउँदै उहाँले डीपीआर र ईआईए गर्न बजेटको समेत सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार सो सुक्खा बन्दरगाहको कुल निर्माण लागत एक अर्ब ५० करोड ९२ लाख ९३ हजार रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । करिब साढे चार सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सो बन्दरगाहका लागि जग्गा सुनिश्चित भइसकेको गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । सो ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा नै प्रशस्त छ । निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गजुरेलले सो बन्दरगाहमा रेल–वे र सडक पूर्वाधारको समेत ‘लिङ्क’ हुने बताउँदै मुख्य रूपले भन्सार पूर्वाधार, प्रशासन पूर्वाधार, कन्टेनर यार्ड, सुरक्षा बेस, पार्किङ, क्वारेन्टाइन कार्यालय, पेट्रोल पम्प र डिप बोरिङलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
दुई वर्षअघि नै उत्तरी कोरला नाकाको २४ नम्बर सीमास्तम्भको नेपालतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छोडेर सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न आवश्यक जमिनको लालपुर्जा तयार भइसकेको छ ।
Previous Previous post: माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली आजदेखि
Next Next post: माधव नेपाल पार्टी एकतको विपक्षमा